Jiri ụdị chọọ ụlọ gị mma maka ụlọ ejiji | Icho mma
Ụdị ụlọ mgbakwasa iji ụdị chọọ ụlọ gị mma
Susana godoy | 25/10/2021 10:23 | .Chọ Mma
Iji ụdị chọọ ụlọ gị mma nwere ike ịbụ ihe dị mfe karịa ka i chere, n'ihi na n'ime ihe niile nkọwa ma ọ bụ ngwá ụlọ na anyị nwere ike na-eche banyere bụ ụlọ ejiji. Kedu onye na-ahụbeghị nrọ nke akụkụ ndị ahụ jupụtara na uwe na ngwa ndị anyị hụrụla ọtụtụ narị ugboro na nnukwu ihuenyo?
Ugbu a ị nwekwara ike ịnweta ya n'ụlọ gị, mana nke mbụ ị ga-achọpụta n'etiti ndị ahụ niile ụdị nke ị ga-ahụ dabere na atụmatụ ha. Ọ ga-abụ ọrụ nka n'ime ihe ndozi na ị nwere ike ịnabata n'ụlọ gị, ịbụ anyaụfụ nke ọtụtụ. Ịchọrọ ịchọpụta nke n'ime ihe niile ga-akacha mma na gị na ụdị gị?
1 Iji ụdị chọọ ụlọ gị mma: Họrọ ime ụlọ ejiji mepere emepe
2 Ime ụlọ ejiji 'U' mere
3 Ụlọ ime njem ọgbara ọhụrụ nwere ọdịdị 'L'
4 Ụlọ akwa akwa nwere agwaetiti?
5 Ụlọ ejiji na tebụl ejiji: Otu n'ime ihe ndị a na-apụghị iru eru iji mee ka ụlọ gị chọọ mma
Iji ụdị chọọ ụlọ gị mma: Họrọ ime ụlọ ejiji mepere emepe
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime ngwọta kachasị mma maka ụlọ gị. Mbụ n'ihi na Enwere ike ịmegharị ya na oghere buru ibu yana ndị ọzọ dị ntakịrị na nke abụọ, ọ na-adị mkpa ka a hazie ya nke ọma mgbe niile. nke mere na ọ na-enye anyị ụdị ahụ anyị kwuru nke ukwuu. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ otu n'ime echiche ndị kachasị mma, maka akụkụ akụ na ụba nakwa n'ihi na ị nwere ike jikọta ya na igbe nchekwa mgbe niile ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ime ụlọ ndị mepere emepe na-enye ohere karịa, ọkachasị mgbe anyị kwuru banyere obere ọnụ ụlọ.
Ime ụlọ ejiji 'U' mere
Ọ bụ ọzọ n'ime nnukwu echiche na anyị na-ama na-ahụ anya. N'ihi na ọ bụ maka ikenye ya nnukwu akụkụ nke ọnụ ụlọ. Ụdị 'U' na-agba mbọ ibiri atọ n'ime mgbidi anọ ahụ, mana n'enweghị obi abụọ ọ bụla, iji ụdị ejiji na ime ụlọ dị otú a chọọ ụlọ gị mma. Ị ga-enwekwu ohere na ị gaghịzi achọ kaboodu ndị ọzọ ma ọ bụ ebe dị mkpa iji nwee ike ịchekwa uwe gị niile. Ụlọ ime ụlọ n'ụdị 'U' nwere ma drawer na shelves na ebe ndị ọzọ buru ibu maka hangers, n'ihi ya, ha bụ ndị kasị zuru ezu.
Ụlọ ime njem ọgbara ọhụrụ nwere ọdịdị 'L'
Ikekwe n'ihi na ha na-ekpuchi obere oghere mana n'ezie ha bụ ihe ọzọ nke echiche ndị anyị ga-eburu n'uche. Ọ bụrụ n’ịhọrọ ha, ị nwekwara ike ịkụ nzọ na agba ọcha ma tinye enyo. Ihe a niile ga-apụta na n'ime ụlọ ebe ị na-etinye ya, ị nwere ike nweta njupụta. Ọ bụ echiche na-adịghị agafe agafe ya mere ọ ga-adị mgbe niile na ejiji na uru na ọ ga-enyere gị aka ịchekwa ihe niile ị chọrọ. Ha na-enwekarị drawer dị n'akụkụ ala na ụlọ elu maka igbe nchekwa.
Ụlọ akwa akwa nwere agwaetiti?
Mgbe ahụ, ọ ga-abụrịrị nrọ dị ukwuu nke iji ụdị ejiji na ohere dị ukwuu chọọ ụlọ gị mma. N'ihi na otu agwaetiti dị na kichin bụ ebe nchekwa ọzọ na ụdị ụlọ a agaghị ahapụ ya. Àgwàetiti a na-ajụ ajụjụ ga-enwe drawer na-adịghị agwụ agwụ, nke na-eduga anyị ikwu banyere eziokwu ahụ bụ na uwe ma ọ bụ ihe kachasị nta bụ n'ezie ihe nwere ebe ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa akpụkpọ ụkwụ gị nke ọma ma hapụ ngwa ndị ahụ maka ebe ọzọ, mgbe ahụ kwa a ga-enwe agwaetiti mepere emepe nwere ọtụtụ oghere maka akpụkpọ ụkwụ gị. Agwaetiti mepere emepe ma ọ bụ mechiri emechi, kedụ nke ị ga-ahọrọ?
Ụlọ ejiji na tebụl ejiji: Otu n'ime ihe ndị a na-apụghị iru eru iji mee ka ụlọ gị chọọ mma
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka iji ụdị chọọ ụlọ gị mma, otu n'ime ọmarịcha echiche nke ndị anyị na-ahụ na fim ma ọ bụ usoro nke na-amasị anyị nke ukwuu enweghị ike na-efu. N'ihi na were ya na ị nwere ọnụ ụlọ Ezubere naanị maka ime ụlọ mana maka ndị agadi nwere ebe akwa akwa. N'ime ya ị nwere ike iji ejiji ma na-emegharị, chịkọta ntutu gị na ihe niile ị nwere ike iche. Ọ bụ eziokwu na n'agbanyeghị na ọ bụ ihe a na-apụghị irute n'ihe gbasara nha ụfọdụ, ikekwe enwere ike ịmegharị ya na ohere gị. I kweghi ya? Naanị ị ga-ahọrọ ngwá ụlọ dị mma nke na-aga n'akụkụ mgbidi dum, hapụ obere oghere maka tebụl mgbakwasa na oche oche, ebe enyo nwere ike ịbanye n'ọnụ ụzọ ọ bụla nke ime ụlọ ahụ n'onwe ya ma nyekwuo ohere na ìhè. Kedu ihe ị chere? Ọ ga-abụ ọrụ ọhụrụ gị n'ụlọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » .Chọ Mma » Ụdị ụlọ mgbakwasa iji ụdị chọọ ụlọ gị mma
Agba kacha mma agba mgbidi ime ụlọ
Igodo igodo obere oghere